Waa maxay sababta KingHow - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
KingHow waa soo saaraha dhammaan boorsooyinka loogu talagalay banaanka, qolka jimicsiga, safarka iyo qaab nololeedka. Alaabtayada ugu waawayn waxaa ka mid ah Dambiisha Qalabka Baseball, Bacda la Dagaalanka Kalluumeysiga, Dambiisha Ugaarsiga, Dambiisha toogashada, Dambiisha Xeegada Barafka, Boorsooyinka Kaamamka, Boorsooyinka Ciyaaraha, Boorsada maalinlaha ah, Boorsooyinka Laptop, Boorsooyinka Golf, Gacmo gashi baseball iyo wixii la mid ah. Waxaan taariikh fog ku leenahay alaab-qeybiyaha boorsooyinka iyo boorsooyinka loogu talagalay iibsadayaasha adduunka oo dhan. Waxaan bixinaa adeegyo kaladuwan oo buuxa oo loogu talagalay labadaada su'aalood ee OEM iyo ODM labadaba qiimaha warshadaha tartamaya.
Daahfurnaan & Daacadnimo
Dhisida kalsoonida waxa ay tahay inaan sameyno ayaa ah inaan si cad oo hufan adiga kulaula socodsiino. Kooxdayadu waxay diyaar u yihiin inay ku siiyaan dhammaan faahfaahinta macluumaadka aad rabto inaad ka ogaato annaga, ku saabsan nidaamkayaga ama xitaa faahfaahinta xisaabinta qiimahaaga.
Waxqabadka Masuulka ah
Qaabkeena ganacsi waa masuuliyada iyo waxqabadka. Waxaan fahansanahay inta khatartu qaadanayso iibsadayaasha markay la macaamilayaan soo saarayaasha bacaha Shiinaha. Warshaduhu waa inay marka hore hubiyaan tayada iyo qiimaha wanaagsan.
Boorsooyinkeennu waxay u hoggaansami karaan dhammaan heerarka caalamiga ah sida TOV, CSCV, SGS, TUV, ITS, REACH iwm. Waxaan dammaanad ka qaadeynaa tayadeena, haddii aan ku guul darreysano ballanqaadkiisa waxaan qaadaneynaa mas'uuliyado buuxda, dib ayaan u cusbooneysiin doonnaa ama lacag ayaan kuugu soo celin doonnaa.
Iyada oo khibradeena hodanka ah, waxaan soo jeedin karnaa dhar, qalab ama qaab kale oo naqshadeyn ah si aan u hagaajino qiimaha si aan ula kulanno bartilmaameedkaaga mashruuca bacda. Waxaan maskaxda ku hayn doonaa inta ugu yar ee looga baahan yahay tayada baaritaanka iyo xalka.
Nidaamkeena wax soo saar ee dabacsan iyo maarayntiisuba wuxuu hubin doonaa tayada iyo tirada labadaba, waxaan siino waqtiga ugu dhaqsaha badan ee wax soosaarka warshadaha geeskasta oo aduunka ah. Caadi ahaan waqtigeenna hogaamintu wuxuu noqon doonaa 35-40 maalmood.
Si loo heli karo, si deg deg ah uga jawaabo e-maylladaada iyo weydiimahaaga, si aan kaaga caawino abuurista badeecadaada oo aad xal u hesho, kuwani waa qaar ka mid ah fikradaha ay KingHow horumarinayso si ay macaamiisheena ugu keento qanacsanaan sare.
Hadal iyo Isdhaafsi
Markuu iibsaduhu bilaabo inuu rumeysto inaan runtii ka go'anahay qanacsanaantooda, waxaan bilaabi karnaa isweydaarsiga iyo ka hadalka qoto dheer rajada iibsadaha. Kooxdayada ayaa diyaar u ah inay ku siiyaan talo iyo xallin.